DF & AMISOM oo qabtey Janaale
14 Feb 14, 2013 - 6:52:44 AM
Ciidamada DF iyo kuwa AMISOM ayaa Maanta [Feb 14, 2013] la wareegay deegaano ay ka mid yihiin Janaale, Bariire iyo Awdheegle oo ay Al-shabaab ka talinaysay afartii sano ee lasoo dhaafay.
Goobjoogayaal ku sugan deegaanadan ayaa laga soo xigtay in ciidamada Dowlada Somalia iyo kuwa AMISOM oo wata gaadiid dagaal oo ay ka mid yihiin Taangiyo iyo kuwa gaashaaman.
Taliye ku xigeenka Ciidamada DF Gen. C/kariin Yuusuf Aadan [Dhegabadan] oo Warbaahinta la hadlay isagoo ku sugan deegaanada laga qabsaday Al-shabaab ayaa sheegay inay la kulmeen iska-caabin aan xoog badnayn.
“Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM waxay hada fariisimo ka sameysteen deegaanada kala ah: Janaale, Awdhiigle iyo Bariire, kadib markii aroornimadii hore ee saakay aan kula wareegnay si nabadgalyo ah” ayuu yore Gen. Dhegabadan.
Ururka Al-shabaab ayaan weli ka hadlin deegaanada laga qabsaday Maanta, iyadoo wararka laga helayo deegaanadaas ay sheegayaan in maleeshiyadii Al-shabaab ay u ruuqaansadeen dhinaca Koonfureed ee Gobolka Shabeelada Hoose.
Sanadihii lasoo dhaafay ayaa Al-shabaab waxaa laga qabsaday deegaano ku yaala Gobolada Bartamaha iyo Koonfurta Somalia halkaasoo sanado badan ay ka talinayeen, waxaana deegaanadaas ka mid ah Degmada Kismaayo oo ahayd saldhigooda ugu weyn.
Horumarada ay ciidamada DF iyo kuwa AMISOM ka sameynayaan dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab ayaa waxay muujinaysaa tabardarida Al-shabaab oo u muuqda in laga qabsan doono deegaanada ay ka taliyaan oo dhan.